UAB Bank Sawbwargyigoan, ရန်ကုန် — လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်, လမ်းညွန်
UAB Bank Sawbwargyigoan, ရန်ကုန်လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်, စစ်ဆင်ရေး၏နာရီ, လမ်းညွန်
လိပ်စာ	Shop No,134-1/2, ပြည်လမ်း, ရန်ကုန် 95, မြန်မာ
ဖုန်းကို	01 964 0175
UAB Bank Sawbwargyigoan, မှာတည်ရှိပါတယ် — Shop No,134-1/2, ပြည်လမ်း, ရန်ကုန် 95, မြန်မာ. ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ဘဏ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအလုပ်လုပ်နေကြသည်.
ဒါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖုန်းကမ်းပေါ်မှာအလုပ်သတ်မှတ်အကြံပြုသည် 01 964 0175.
ရိုးမဘဏ်, 111 မီတာ။ ကမ္ဘောဇဘဏ်, 244 မီတာ။ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်, 274 မီတာ။ UAB ( Saw Bwar Gyi Gone Branch ), 276 မီတာ။ Co-operative Bank, 331 မီတာ။ C B Bank Sawbwagyigone Branch, 356 မီတာ။ ကမ္ဘောဇဘဏ်, 408 မီတာ။
ပုသိမ်, 148.66 ကီလိုမီတာ မန္တလေး ချမ်း​မြ​သာ​စည် လေဆိပ်, 561.59 ကီလိုမီတာ မန္တလေး, 565.43 ကီလိုမီတာ